18 desambra 2018 - FJKM Québec - Canada Aza misalasalamandray fa fahendrena maro no azontsika tovozina ao anaty Soratra Masina.
18 desambra 2018
17 décembre 2018 by Njaka Ramanandafy
Fandalinana ny 1 Samoela
SAMOELA VOALOHANY 25 : 32-44
25:32 Ary hoy i Davida tamin’i Abigaila: Isaorana anie i Jehovah, Andriamanitr’i Israely, Izay naniraka anao hihaona amiko androany.
25:33 Ary hotahiny anie ny fahendrenao, ary hotahiny anie ianao, izay niaro ahy androany tsy hahazo heloka amin’ny fandatsahan-dra ary tsy hamaly ho an’ny tenako.
25:34 Kanefa, raha velona koa i Jehovah, Andriamanitr’i Israely, Izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy avy faingana hitsena ahy ianao toy izay, dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy iray aza amin’i Nabala ambara-pahazavan’ny andro.
25:35 Ka dia noraisin’i Davida teny an-tanany ilay zavatra nentiny, ary hoy izy taminy: Miakara soa aman-tsara ho any an-tranonao ianao; indro, efa nohenoiko ny feonao, ary nankasitrahako ianao.
25:36 Ary i Abigaila dia tonga tao amin’i Nabala; kanjo, indro, nanao fanasana tao an-tranony izy tahaka ny fanasan’ny mpanjaka, ary faly ny fon’i Nabala tamin’ izany, ary mamo loatra izy, ka dia tsy nisy nambaran’ny vavy taminy, na kely na be mandra-pahazavan’ny andro.
25:37 Ary nony maraina, ka afaka ny hamamoan’i Nabala, dia nambaran’ny vavy taminy izany zavatra izany, ka dia matihena ny fony ka tonga tahaka ny vato.
25:38 Ary nony afaka hafoloana, dia nasian’i Jehovah i Nabala, ka dia maty izy.
25:39 Ary nony ren’i Davida fa maty i Nabala, dia hoy izy: Isaorana anie i Jehovah izay niady ho ahy ka nahafa-tondromaso ahy tamin’i Nabala sy niaro ny mpanompony tsy hahatanteraka ny ratsy; fa ny ratsy nataon’i Nabala dia nampodin’i Jehovah ho eo an-dohany ihany. Ary i Davida naniraka hiresaka amin’i Abigaila hila azy ho vady.
25:40 Ary nony tonga tany amin’i Abigaila teo Karmela ny mpanompon’i Davida, dia hoy izy: I Davida naniraka anay hankaty aminao hila anao ho vadiny.
25:41 Dia nitsangana izy ary niankohoka tamin’ny tany ka nanao hoe: Indro, aoka ny ankizivavinao ho mpanompo hanasa ny tongotry ny mpanompon’itompokolahy.
25:42 Ary i Abigaila nitsangana faingana ka nitaingina boriky, ary ankizivaviny dimy no nanaraka azy; dia nanaraka ny irak’i Davida izy, ka dia novadiny.
25:43 Ary i Davida efa nanambady an’i Ahinoama avy any Jezirela koa; ary samy novadiny avokoa izy roa vavy.
25:44 Fa i Saoly efa nanome an’i Mikala, zanany vavy, vadin’i Davida, ho vadin’i Palty, zanak’i Laisy, avy any Galima.
Mitohy ny tantara ary ampianarin’ny Tompo antsika lesona vaovao indray:
1-Mianara ny fahendren’i Abigaila
Izy dia sahy nandray ho an’ny tenany ny heloka nataon’ny vadiny . izy no nifona .Izy no nanonitra ny zavatra tsy nety nataon’ny vadiny. Izy no nisahirana nitondra ireo fanomezana betsaka hampitoniana ny fahatezeran’i Davida.Fahafoizan-tena mendri-piderana tokoa izany . Ary moa tsy mihoatra noho izany ve ny nandraisan’i Jesoa ny toerantsika mpanota ka nanekeny hanao sorona ny tenany teo amin’ny hazo fijaliana?
2-Mianara ny fahendren’i Davida
Etsy andaniny , nanaiky hihainosy handray ny fifonana sy ny fanomezana natyolotra azy i Davida. Misy manko olona tsy mety mandray ny fifonan’ny hafa fa miziriziry fotsiny . Etsy ankilany , novaliany tokoa ilay fanirian’i Abigaila (and31b)ka nakariny ho vadiny izy. Endrika fahaiza-mankasitraka izany teto.Tandremo ! tsy toetrav tsara kosa anefa ny vady maro.
3-Tandremo ny fiafaran’i Nabala .
Afaka mifety amin’ny harembe ananany ny adala , nefa fahafatesana no iafaran’izany .Tsy nahasoa azy akory ny harena tsy foiny nanampiana ny sahirana . Fa nitsangana ho fahavalon’ny Tompo izy, ka ny Tompo mihitsy no namely azy.